घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू जोसिप Ilicic बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
अन्तिम अपडेट गरिएको फेब्रुअरी 14, 2020
सुरू गरेर, उनको उपनाम छ “Iliciclone“। हाम्रो लेखले तपाईंलाई जोसिप इलिकिक बचपन कहानी, जीवनी, पारिवारिक तथ्य, अभिभावक, प्रारम्भिक जीवन, जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन र अन्य लोकप्रिय घटनाहरूको पूर्ण दृश्य दिन्छ जब उनी बच्चा थिए जबदेखि उनी लोकप्रिय भए।
जोसिप Ilicic को जीवन र उदय। छवि क्रेडिट: गोल र मार्का।
हो, सबैजनाले अटलान्टा ई.पू. २०१ for को सुपर २०१ 2019/२०२० सत्रमा देखाए जस्तै गोलहरू सिर्जना गर्ने, सहायता गर्ने र स्कोर गर्ने क्षमताको बारेमा सबैलाई थाँहा छ, तथापि, केवल थोरै मात्र हाम्रो जोसीप इलिसिकको जीवनीको संस्करण लिन्छ जुन धेरै चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Josip Ilicic बचपनको कथा
जोसिप Iličić जनवरी १ 29 1988 को जनवरी २ day को दिन बोस्निया र हर्जेगोविनाको प्रजेदोर शहरमा जन्म भएको थियो। ऊ आफ्नो आमा आना र उनको सानो ज्ञात बुवाको लागि जन्मेको थियो जुन लेख्ने समयमा ढिला छ। के तपाईंलाई थाहा छ कि जोसिप क्रोएशियाली परिवारको उत्पत्तिसँग मिल्दोजुल्दो जातिको स्लोभेनियाली नागरिक हो।
जोसिप इलिसिकका आमाबुबाको बारेमा इन्टरनेटले थोरै थाहा पाउँदछ। छवि क्रेडिट: क्लिपार्ट्स स्टुडियो।
उहाँ एक वर्षको मात्र हुनुहुन्थ्यो जब उनका बुवा मरे र जोसिप इलिसिकको परिवार पीडाबाट गुज्र्यो र अगाडि बढ्यो। त्यसपछि, जोसिप आमा सानो परिवारको बाँकी भाग लिएर युद्धग्रस्त बोस्नियाई शहर प्रिजोरबाट स्लोभेनियाको क्रान्जको खेलकुद केन्द्रतिर भागिन्।
यो क्रान्ज शहर मा थियो कि जोसिप उनको ठूला भाइ इगोरको साथ फुटबल खेल्न हुर्केका थिए। यो खेल भाइहरू विशेष गरी जोसिपको लागि उम्कने कुरा थियो जसको बोस्नियाली युद्धको बारेमा नराम्रो सोचाइ थियो जसले उनको परिवारलाई स्लोभेनियामा शरणार्थी बनायो।
Josip Ilicic फुटबलको साथ प्रारम्भिक वर्षहरू
जोसिप 6--7 वर्षको उमेरमा, उनले स्थानीय क्लब त्रिग्लाव क्रान्जमा सम्मिलित भएर आफ्नो जेठो दाइको पाइला पछाडि हिंड्ने विचार गरे। क्लबमा प्रशिक्षण एक पूर्ण नयाँ संसार थियो र पहिले घर भित्र खेल्दै आएका जवानका लागि अनुभव थियो।
जोशिपले आफ्नो बाल्यकाल क्लब - त्रिग्लव क्रञ्जमा प्रशिक्षण शुरू गरेकै क्षणदेखि उनी निश्चित थिए कि फुटबल उसको लागि उपयुक्त खेल हो। यसैले, उनले एक दशक (१ 1995 2006 -XNUMX -२००XNUMX) लाई एक बर्षको लागि ब्रिस्टोफमा सामेल हुनुभन्दा अघि खेलकुद प्रदान गरे।
ट्रिग्लाभ क्रन्ज उनीसँग आफ्नो युवा जीवनको सर्वाधिक हिस्सा थियो। छवि क्रेडिट्स: मार्का र पिन्टेरेस्ट।
त्यसपछिको फुटबल सment्लग्नताले जोसिपले बोनिफिका कोपरको लागि खेल्न शुरू गरे जहाँ उसले आफ्नो पहिलो टीमको शुरुवात गर्‍यो। बोनिफिकाका लागि स्लोभेनियाली दोस्रो डिभिजन फुटबल खेल्ने क्रममा जोसिपले आफ्नो प्राकृतिक प्रतिभा प्रदर्शन गर्नदेखि पछि हटेनन् जसले इन्टरब्लॉकको ध्यानाकर्षण गर्‍यो।
जब जोसिप अन्ततः २०० Inter मा इन्टरब्लॉकमा आए, उनले यस क्लबको सबैभन्दा राम्रो खेलाडी र स्लोभेनियाली फुटबलको शीर्ष सम्भावना बन्नको लागि छनौट गरेर आफूलाई क्लबमा स्थापित गर्न तुरुन्तै अग्रसर भए।
इन्टरब्लॉकमा मिडफिल्डरको एक दुर्लभ तस्बिर। छवि क्रेडिट: Calcioengland।
सडकको प्रसिद्धि कथा
यद्यपि, चीजहरू जोसिपको लागि दक्षिणतिर लाग्न थाले जब २०० – -१० सत्रमा इन्टरब्लॉकले सतावट भोग्यो। त्यस पछि, इंटरब्लॉकले धेरै परिवर्तनहरू गर्‍यो कि मिडफिल्डरको डिमोसन क्लबको रिजर्भ टोलीमा देखापर्‍यो कि ऊ एक उत्तम खेलाडी हो भन्ने तथ्यलाई परवाह नगरी।
२१ वर्षको उमेरमा, जोसिपले महसुस गरे कि उनले जीवनको निराशाहरू पूरा गरिसकेका छन र आफ्नो खेल क्यारियर अन्त्य गर्नेबारे सोचेका थिए। केही हप्ता पछि, उसले मारिबोरबाट जीवन परिवर्तन गर्ने फोन प्राप्त गर्यो जसले उनलाई क्लबमा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव राख्यो।
उनले असहाय देख्यो कि इन्टरब्लॉक रोयलगटपनमा फस्छ र उसले पहिलो टीममा आफ्नो स्थान गुमायो। छवि क्रेडिट: ESPN
फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
भाग्यशाली जोसिपका लागि, उनले प्रस्ताव लिए र क्लबमा ठूलो प्रभाव पार्नको लागि गए जहाँ उनले युईएफए यूरोपा लिग खेलहरूमा क्लबसँग आफ्नो एकल सत्रमा प्रमुख गोलहरू बनाए। जब जोसिपले इटालीमा खेल्न शुरू गरे पनि उनले पालेर्मोदेखि फिरेन्टीनासम्म शुरू गरेर भरपर्दो आक्रमणकारी मिडफिल्डरको रूपमा आफ्नो स्थिति कायम राखे।
छिटो अगाडी जोसिप लेख्ने समय अगाडि अटलान्टामा सराहनीय सेवाहरू प्रस्तुत गर्दैछ, एक क्लब जुन उसले २०१ 2017 मा फिरेन्टीनाबाट सामेल भयो। क्लबका मुख्य खेलाडीहरूसँग टिम अप गर्दै पापु गोमेज र डुवन जपता, जोसिपले सेरी एमा क्लबलाई ऐतिहासिक तेस्रो स्थानमा पुग्न मद्दत गरे, क्लबलाई पहिलो चोटि २०१––२० युईएफए च्याम्पियन लिग समूह चरणमा कमाए।
उनले पापु गोमेज, डुवान जपाटा र अरूसँग मिलेर एट्लान्टालाई २०१–-१– सत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धिहरू रेकर्ड गर्न मद्दत गरे। छवि क्रेडिट: स्वतन्त्र।
Josip Ilicic प्रेमिका, पत्नी र बच्चाहरू
जोसिप इलिसिक प्रेम जीवनमा अघि बढ्दै, उनीसँग एक विभागमा उनको लागि अविवाहित वैवाहिक सम्बन्ध रहेको छ, उसकी प्रेमिका बनेकी श्रीमती - टीना पोलोविनालाई धन्यवाद। जोसिपले २०० in मा टिनालाई भेटेकी थिइन जब उनी Jos०० - meters०० मिटर दौडमा एथलीट प्रशिक्षण थिई जहाँ जोसिपले प्रशिक्षण दिएकी थिइन्।
जोसिप Ilicic उनकी पत्नी टीना Polovina साथ। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
उनीहरू पछि डेटि began गर्न थाले र विवाह गर्न गए। यसमा जोसिपसँग अन्य गर्लफ्रेंडहरू भएको कुनै अभिलेखहरू छैन किनभने टीना उसको लागि एकदम सही थियो। के तपाईंलाई थाहा छ जोसिपको सानो मुटु गोल उत्सव टिनाका लागि हो जसले उनको लागि दुई छोरी जन्माएकी छिन्? जोसिप इलिसिक र टीना दुबै सोफिया र भिक्टोरियाका अभिभावक हुन्।
जोसिप इलिसिकका डगथर्स सोफिया र भिक्टोरियासँग भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
Josip Ilicic पारिवारिक तथ्यहरू
जब जब जोसिप इलिसिक आफ्नो आशीर्वाद गणना गर्छन्, उसले परिवारलाई दुई पटक गणना गर्दछ र आफ्नी आमा र भाइबिना उनको के हुन्छ भनेर कल्पना गर्न सक्दैन। यस सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई जोसिप आईलिकको आमा बुबा र परिवारका सदस्यहरूको बारेमा बढी जानकारी प्रदान गर्दछौं।
जोसिप इलिसिक बुबा र आमाको बारेमा:
जोसिप इलिसिकका दुबै आमाबुवा- उनका लेट बुवा र आमा क्रोएसियाली पारिवारिक जराका छन्। यो भनिन्छ कि जोसिप बुबाको उमेर एक बर्षको थियो जब युद्धग्रस्त बोस्निया मा मृत्यु भयो। यद्यपि यो थाहा हुन सकेन कि उनको मृत्यु युद्ध वा प्राकृतिक कारणले भएको हो। यो जोसिपकी आमाले उनलाई स्लोभेनियाको क्रान्ज शहरमा मध्यमवर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्काउनुभयो। मिडफिल्डरले उनलाई उनको त्रिग्लव क्रञ्जमा दर्ताको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने श्रेय दिई।
जोसिप इलिसिक भाई बहन र आफन्तहरूका बारे:
जोसिपको कुनै बहिनीहरू छैन तर सानो ज्ञात दाजु इगोरको रूपमा चिनिन्छन्। तिनीहरू सँगै फुटबल खेल्ने क्रममा जोसिपले आफ्नो पाइला पछ्याए। मिडफिल्डरको पुर्खा बारे तथ्यहरू खास गरी उसको बुवा र बुवा हजुरआमाका बारे अज्ञात छ जबकि उनका बुबुआ, भतिजा र भतिजीहरू अझै लेख्नको लागि थाहा छैन।
Josip Ilicic व्यक्तिगत जीवन
जोसिपको व्यक्तित्वको निर्माण के हो र व्यक्तिले उसलाई कसरी फुटबलको दुनिया बाहिर देख्छन्? यहाँ मिडफिल्डर व्यक्तित्वको बाह्य रूपरेखालाई रूपरेखा बनाउने भनेको ठिकसँग मिल्दो ठाउँ मात्र हो जसको राशि चिन्ह कुम्भ राशि भएका व्यक्तिको व्यक्तित्व पनि परिभाषित गर्दछ।
उहाँ विश्लेषणात्मक, अद्वितीय, कार्य-तयारी, सम्मानजनक र विरलै आफ्नो निजी र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू प्रकट गर्नुहुन्छ। बाहिर फुटबल फुटबल जोसिपको बास्केटबल, गल्फ, पौडी खेल्ने, माछा मार्ने र आफ्नो परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय बिताउन रुचि छ।
माछा मार्ने काम उनी फुर्सतका लागि के गर्छन्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
Josip Ilicic जीवन शैली
के तपाईंलाई थाहा छ यो जीवनी लेख्ने क्रममा जोसिप इलिसिकको अनुमानित कुल १० मिलियन डलर भन्दा बढी छ? उसको प्राथमिक आय स्रोत ज्याला र तलब हो कि ऊ शीर्ष उड़ान फुटबल खेल्न को लागी प्राप्त गर्छ जबकि अनुमोदनबाट आय आफ्नो बढ्दो सम्पत्ति बढाउन।
त्यस्तै, मिडफिल्डरले विदेशी कारहरूमा सवारी गर्न र राम्रो घर वा अपार्टमेन्टमा बस्न सक्दछन्। ऊ पनि शीर्ष-रेटेड रिसोर्टमा राम्रो समय बिताउन मन पराउँदछ जहाँ ऊ आफ्नो बिदामा रमाईलो गर्दछ।
उहाँ $ १० भन्दा बढि मूल्यवान हुनुहुन्छ र जीवनको आनन्दको आनन्द लिनदेखि सर्नुहुन्न। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
Josip Ilicic तथ्य
हामीले यसलाई जोसिप इलिसिकको बाल्यकाल कहानी र जीवनीमा बेर्ने कल गर्नु अघि, उहाँबारे कम ज्ञात वा अनकही तथ्यहरू छन्।
लेख्ने समयमा जस्तो, स्लोभेनियाली फुटबलरको अनुबन्ध एटलान्टा ई.पू. उसलाई २,2,778,000,००० को ठूलो तलब कमाउँछ प्रति वर्ष। जोसिप इलिसिकको तलब संख्यामा क्रunch्च गर्दै, हामीसँग निम्न ब्रेकडाउन छ।
युरोमा कमाएको रकम (€)
प्रति वर्ष € 2,778,000
प्रति महिना € 231,500
प्रति हप्ता € 57,875
प्रति दिन € 8,268
प्रति घण्टा € 344.5
प्रति मिनेट € 5.74
यहाँ, हामीले जोसेप इलिसिकको तलब हरेक सेकेन्डमा वृद्धि गरेका छौँ, यसलाई प्रति सेकेन्ड आम्दानीमा क्रन्च गर्दै।
यो यो छ कि योशिप इलिकले कत्ति धेरै कमाई गरेको छ किनकी तपाईले यो पृष्ठ हेर्न सुरू गर्नु भएको छ.
यदि तपाइँले माथि के देख्नुहुन्छ अझै पढ्छ (०), त्यसो भए यसको मतलब यो हुन्छ कि तपाइँ एएमपी पृष्ठ हेर्दै हुनुहुन्छ. अब क्लिक गर्नुहोस् यहाँ सेकेन्डमा उसको तलब वृद्धि देख्न. तपाईंलाई थाँहा थियो?… यो कम्तिमा यूरोपमा बसोबास गर्ने औसत कामदार लिने छ 10 वर्ष जस्तै कमाउन जोसिप १ महिनामा कमाउँछ।
लेख्ने समयमा जोसिपको धर्मको बारेमा थोरै मात्र थाहा छ। यद्यपि अन्तर्वार्ता र प्रेस सम्मेलनहरुमा ऊ कहिल्यै धार्मिक हुन सकेको छैन भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै उसको मनस्थितिमा अडिग व्यक्ति छन्।
जोसिपको लेखनको समयमा F 84 को समग्र फिफा रेटिंग छ। हो, रेटिंग्सको बर्ष बर्ष बढ्ने संभावना छ र यो प्रशंसकहरु लाई ठूलो खुशी लाग्छ जसले FIFA क्यारियर खेलहरु को लागी उहाँलाई प्रयोग गर्ने काल्पनिक हो।
उसको रेटिंग्स उचित छ र बढ्ने सम्भावनाहरु छन्। छवि क्रेडिट: SoFIFA।
धुम्रपान र मदिरा:
मिडफिल्डर धूम्रपान गर्दैन, न त लेख्दाको समयमा पिउन दिइन्छ। बरु ऊ स्वस्थ जीवनशैली कायम राख्नमा केन्द्रित छ जुन शीर्ष उडान फुटबलको कठोरता खडा गर्न सक्छ।
जस्तै एन'गोलो कान्टा, डेविड लुइज र मोहम्मद सलाह, शारीरिक कला सम्भवतः जोसिपको रुचिको सूचीको अन्तिम एजेन्डा हो किनकि उसको १.1.9 मिटरको उचित उचाईको साथ उसको परिपक्व दृश्यले उसलाई डिफेन्डर्समा शक्तिशाली हमलाउने मिडफिल्डर बनाउँछ।
विकी नलेज बेस
जोसिप इलिसिकको जीवनी तथ्यहरूको यो अन्तिम खण्डमा, तपाईंले आफ्नो विकी ज्ञानको आधार देख्नुहुनेछ। यसले तपाईंलाई संक्षिप्त र सजिलो तरिकामा उसको बारेमा जानकारी फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
जन्म मिति र स्थान: २ January जनवरी १ 29 1988 (प्रिजेडर, SFR युगोस्लाभिया)
उमेर: Years२ बर्ष (लेख्ने समयमा)
उचाइ १.1.9 मिटर वा १.1.90 ० मिटर (f फिट in इन्च)
बुबा लेट Iličić
पत्नी: टीना पोलोविना
बच्चाहरु: सोफिया र भिक्टोरिया
क्लब सम्मान: (i) स्लोभेनियाली कप: २००–-०2008
(ii) स्लोभेनियाई सुपरकप उपविजेता: २००।
(iii) स्लोभेनियाई सुपरकप उपविजेता: २०१०
(iv) कोपा इटालिया रनर-अप: २०१०–११
(vi) कोपा इटालिया रनर-अप: २०१–-१–
(vii) कोपा इटालिया रनर-अप: २०१––११
खेल्ने स्थिति: मिडफिल्डर आक्रमण गर्दै
व्यक्तिगत सम्मान: erie वर्ष को टीम: २०१–-१–
(ii) स्लोभेनियाली फुटबलर वर्ष: २०१ 2019
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो जोसिप Ilicic बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्क पढ्न को लागी धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
परिमार्जित मिति: जनवरी ,०, २०१ 25